Igbo, John: Lesson 021 - Ịchacha ụlọ nsọ ahụ (Jọn 2:13-22) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 021 (Cleansing of the Temple)
1. Ịchacha ụlọ nsọ ahụ (Jọn 2:13-22)
13 Ememe ngabiga nke ndi-Ju di nso, Jisus we rigoro Jeruselem. 14 O we hu n'ulo uku Chineke ndi nēre ehi, na aturu, na nduru, na ndi nāb͕anwe ego; 15 O we chiri udọ me utari, we chupu ha nile n'ulo uku Chineke, ma aturu ma ehi; ọ wụpụkwara ndị na-agbanwe ego, ma kwatuo tebụl ha. 16 O we si ndi nēre nduru, Chipunu ihe ndi a n'ebe a; Unu emela ulo Nnam ka ọ buru ulo ahia. 17 Ndi nēso uzọ-Ya chetara na edere ya-ri n'akwukwọ nsọ, si, Ekworo ulo-Gi gēripiam.
Jisos rigoro Jerusalem n'oge ememe ahu - Ememe ngabiga, ebe otutu puku ndi Ju nechikota site n'uwa dum n'achu aja, n'icheta na iwe nke Chineke chebere ndi ha n'ihi Ememe ngabiga. Nwa Atụrụ. N'ihi ya, n'ejighị ọbara wụpụ, ọ dịghị mgbagha mmehie. Ma n'enweghi mmekorita, ofufe bu ihe efu. Ya mere Jisos weghaara nmehie nke uwa n'igosi baptism na osimiri Jordan. N'ihi ha, ọ ga-anabata baptism nke ọnwụ, ihe ịrịba ama na ọ ga-eburu iwe nke Chineke. O maara n'ezie na ọ bụ Nwa Atụrụ Chineke họọrọ.
Mgbe ọ banyere n'obodo ahụ ma gaa n'ụlọikpe ụlọ nsọ, ịma mma nke ụlọ ahụ enweghị mmasị ya, mana ọ na-eche banyere nzọpụta nke ihe a kpọrọ mmadụ site n'àjà ya. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ chọghị inwe obi iru ala n'ụlọ nsọ ahụ maka ofufe. Ihe o chotara bu uzuzu na uzo, ihe ndi ozo na ndi mmadu na ndi mmadu na ndi mmadu na-agba. Ọ nụkwara mkpu nke ndị na-agbanwe ego na-agbanwe ego ndị mba ọzọ iji nweta ego ndị Juu, ka ndị pilgrim kwụọ ụgwọ ha.
Nkume ndị dị n'ụlọ nsọ ahụ gosipụtara nkwenye na ezi ego nwere ike ịzụta ezi omume na mgbalị pụrụ iche. Ndị njem ala nsọ chere na amara na ezi omume ga-azụrụ site n'ememe na onyinye, ma ha amaghị na nzọpụta apụghị inweta site n'ezi ọrụ.
N'oge a, Jizọs gosipụtara iwe ezi omume ya. Ọchịchọ maka ezi ofufe kpaliri ya ịchụpụ ndị ahịa n'anụ ụlọ ma gbasaa ego ha n'ájá. Anyị agughi na ọ gburu onye ọ bụla, ma olu ya kwuru banyere ụda na Chineke ga-eme ka ndị na-agaghị ekwenye n'iru ebube Ya. Enweghi nsọpuru n'elu uwa nke na-eme Chineke obi uto, ma obugh obi obi gbaghaara Onye Nso.
Jizos mwute n'elu enweghị mmasị nke ndị ikom kwupụta ịdị nsọ nke Chineke. Nleghara na amaghị ihe a na-ahụ na religiosity dị elu na-egosi ọchịchịrị nke na-ekpuchi obi na uche, ọ bụ ezie na Iwu ahụ nyere afọ 1300 tupu oge ahụ. Mgbe nke a gasịrị, Jizọs gosipụtara iwe Chineke na ịnụ ọkụ n'obi dị nsọ iji mee ka ebe ofufe a dị ọcha. Obodo ahụ gosipụtara ọnọdụ dum. O choro mgbanwe maka isi nke okpukpere chi, maka mgbanwe di ukwuu n'ile madu anya na Chineke.
18 Ya mere ndi-Ju zara Ya, si, Gini bu ihe-iriba-ama gini ka I nēme ayi, ebe I nēme ihe ndia? 19 Jisus zara ha, si, Kwatuenu ulo nsọ a, n'ubọchi atọ M'gēweli kwa ya elu. 20 Ya mere ndi-Ju siri, "Ọ dị afọ iri anọ na isii wuo ụlọ nsọ a! Ị ga-ewu ya n'ụbọchị atọ? "21 Ma o kwuru banyere ụlọ nsọ nke ahụ ya. 22 Ya mere mb͕e emere ka O si na ndi nwuru anwu bilie, ndi nēso uzọ-Ya chetara na O kwuru okwu a: ha we kwere ihe edeworo n'akwukwọ nsọ, na okwu Jizos kwuru.
Ndị ụkọchukwu maara banyere ịsacha ụlọ nsọ na mkpu ndị ahịa, n'ihi ya, ha gbagara Jizọs wee jụọ, sị, "Ònye nyere gị ikike ime nke a? Ònye zitere gị? Nye anyị ihe akaebe maka ikike gị." Ha ekwesighi ime ka ha di ọcha; ha chere na Jisos esighi na iwe nke madu, kama site n'inwe obi uto maka idi nma nke ulo Chineke, iweghachi Mo nke ofufe n'eziokwu nye ndi mmadu; kama ha choro ichoputa ihe mere na ebumnobi nke kpaliri ya. Ya mere, Jizọs ghọrọ onye iro n'ihu ha, n'ihi na ọ chọrọ ịgbanwe ụlọ nsọ ahụ n'ejighị ọrụ ndị òtù ha.
Jizọs baara ha mba n'ihi ofufe ihu abụọ ha, n'ihi na ha họọrọ ka ọgba aghara nke ndị na-efe ofufe na masse, na ike nke akụ na ụba ruo nwayọọ nke ọnụnọ Chineke. Site n'ile anya Jis] s hr mbibi nke temple ah n'ihi òfùfè dŽ elu na amaghị ha. Okpukpere okpukpe ndi a haziri edozi na ihe ndi mmadu n'emebeghi ndi mmadu, kama obu mgbanwe nke obi site na nzoputa nzoputa Chineke nke na-agbanwe.
Ebe nzoputa a di ndu n'etiti ha. Jizos bu ezi ulo Chineke na Chineke no nime Kraist no n'ebe ahu. Dị ka a ga-asị na Jisọs na-asị, "Kpochapụ ụlọ nsọ nke ahụ m n'ihi na ị gaghị eguzo ịnụ ọkụ n'obi m maka Chineke: ị ga-eme ihe a na-agaghị ekwe omume ma mebie ụlọ nsọ a, ma m ga-akpọlite ahụ ahụ n'ụbọchị atọ: m ga-ebilite n'ili. ga-egbu m, ma m dị ndụ, n'ihi na Mụ onwe m bụ Ndụ, Chineke n'anụ ahụ. N'ụzọ dị otú a, Jizọs kwusara mbilite n'ọnwụ ya n'ụzọ zuru ezu. Mbilite n'ọnwụ a bụ ọrụ kachasị ebube ya ugbu a.
Ndị nnọchiteanya si nnukwu onye nchụàjà aghọtaghị ilu a banyere ụlọ nsọ ahụ. Ha lere anya na ogidi ndị e ji nkume marble na ụlọ ndị e ji mara mma, ma chee na Jizọs ekwuluwo ebe obibi Chineke, nke Herọd wuru n'ime afọ 46. Ha kwuru banyere nkume; ọ na-ekwu banyere ahụ ya. Mkparịta ụka ndị a dị mkpa ná mmalite nke ozi ya pụtara ọzọ n'ihu ikpe ya n'ihu Sanhedrin kpagharịrị ha site n'enyemaka nke ndị akaebe ụgha.
N'ụzọ doro anya, ndị Agba Ochie aghọtaghị mmetụta nke okwukwe ọhụrụ ahụ nke Kraịst malitere. Ọbụna ndị na-eso ụzọ a ghọtara ihe pụtara ìhè nke ọhụụ ọhụrụ a ruo mgbe ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Jisọs gasịrị. Mgbe ahụ, ha ghọtara otú Ọkpara ahụ si kpuchie mmehie ma bilie ọzọ.
Taa ọ nọnyeere anyị na ụlọ ime mmụọ nke anyị bi na nkume. Mmụọ Nsọ mere ka ndị na-eso ụzọ ya nwuo ìhè iji chọpụta ihe Akwụkwọ Nsọ oge ochie pụtara nke na-akọwa ihe Jizọs kwuru. Ha nọgidere n'okwukwe wee ghọọ Ụlọ nsọ Chineke.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, ị bụ ebe obibi Chineke, na ebe nzukọ nke Chineke na ndị mmehie. Nyere anyi aka ime ncheghari na ife ofufe ma juputa na njuputa gi, ka anyi wee buru ulo nke Mo Nso, ma me ka Nna anyi di uku n'oge obula.
Gịnị mere Jizọs ji gaa n'ụlọ nsọ ma chụpụ ndị ahịa?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:44 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)